आज असार ०१गते तपाईंको राशिफल यस्तो छ!:: Mero Desh
आज असार ०१गते तपाईंको राशिफल यस्तो छ!
Published on: १ असार २०७८, मंगलवार ०२:०९
मेष (चू,चे,चो,ला,लि ,लू,ले ,लो, अ ) कीर्तिमानी काम सम्पादन हुन सक्छ । विभिन्न अवसर पाइनेछ । नयाँ कामको सुरुवात खासै राम्रो छैन । कार्यमा हैरानी बढ्न सक्छ । पारिवारिक भेटघाटको समय छ । टाढिएका आफन्तहरू नजिकिनेछन् ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी, वू, वे,वो) गरेका कामबाट धेरैलाई फाइदा पुग्न सक्छ । सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ । सानातिना समस्या आइरहेपनि दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ । पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ । बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा)एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । विशेष योजनाहरू बन्नेछन् । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ । पढाइमा प्रगति हुनेछ । आत्मीयजनसँग भेटघाट होला । सरसफाइ, बाग बगैंचा सम्बन्धी काममा आकर्षित होइएला ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो)नयाँ काममा हात हाल्न केही समय पर्खंनुहोला । गरी आएको कामलाई भने निरन्तरता दिनु होला । पिडा दिनेहरु सक्रिय रहन सक्छन्, एकदमै सावधान रहनु होला । केही कामका अवसर फुत्क ने सम्भावना देखिन्छ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे)भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिको उपयोगबाट प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ । लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ । प्रतिभा देखाएर अवसर हातपार्न सकिनेछ । मनन, ध्यान वा रचनामा रुचि बढ्नेछ । घरमा बसेरै विभिन्न काम सम्पादन गर्न सकिनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) व्यापारमा फाइदै हुनेछ । काममा मातापिताको सहयोग प्राप्त होला । मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ । भौतिक साधन जुट्नेछन् । कृषि तथा पशु व्यवसायबाट लाभ हुने समय छ । प्राकृतिक पर्यावरणमा रमाउने दिन छ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) अरूलाई प्रभावित पारेर काम लिन सकिनेछ । मेहनत गर्दा सफलता प्राप्त होला । व्यवसायका लागि यात्रा सम्भावना छ । दाम्पत्य जीवन सुखद रहला । लामो यात्राको प्र’क्रिया अघि बढ्नेछ । प्र’यत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यूअस्वभाविक प्रलोभनले अप्ठ्यारोमा परिएला । आफ्नो स्वतन्त्रतामा बाधा पुर्याउन सक्छ । उद्योग तथा व्यापारमा सामान्य फाइदा मिल्नेछ । साथै सामान्य रोगले सताउला । सहयोगीहरूले हात झिक्नाले केही समस्या थपिने देखिन्छ । धन तत्काल खर्च गर्नुपर्ला ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) लगानी, दौ’डधुप, श्रम र प्र’यत्नको उचित मु’ल्य नपाइने समय छ । उत्साहजनक समाचारले हर्ष बढ्नेछ । चिताएको काम पुरा नहुन सक्छ । समझदारी बढ्न सक्छ । कृषि तथा पशुपालनमा खर्च बढ्नेछ ।
मकरभो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गीआश मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ । सानो प्र’यत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ । आम्दानी बढ्नुका साथै भौतिक सा’धन जुटाउन सकिनेछ । नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ । दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने काममा हात हाल्ने समय छ । ता’र्किक क्षमता बढ्नेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा)धा’र्मिक अनुष्ठान र मंगलमय काम सम्पादन हुन सक्छन् । व्यवसायमा लाभ होला । कार्यमा पनि प्र’शस्तै फाइदा हुनेछ । गुरुजनको वि’शेष सहयोग जुट्नेछ । अवसरले पछ्याउनेछन् भने बोलीको प्रभाव पनि बढ्नेछ । धन लाभ होला ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) निश्चय भएको काम अचानक बिग्रन सक्छ । साथीभाइबाट धोका होला । आ’श्वासन दिएर झुक्याउनेहरूले सताउनेछन् । गोपनीयतामा ध्यान दिँदै सचेत रहनुहोला । पुरानो समस्याले केही झमेला आइलाग्न सक्छ । दा’म्पत्य स’म्बन्धमा पनि केही नराम्रो होला ।
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, आज तपाईको राशिफल।ॐ लेखि शेयर गर्नुस्।
पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस् राशिफल